तपाँईलाई थाहा छ ? पसलमा किन झुण्ड्या, इन्छ कागती र खुर्सानीको माला ? यस्तो छ कारण… – Ap Nepal
तपाँईलाई थाहा छ ? पसलमा किन झुण्ड्या, इन्छ कागती र खुर्सानीको माला ? यस्तो छ कारण…
तपाई हामीले अ’धिकांश पस’लमा तथा सवारी साधनको अगाडि कागती र खुर्सानीको माला झुण्डाएको देखेका छौं । यसो गर्नु’को पछाडि कसैको खराब नजर नला’गोस् भनि गरिएको भनिने गरीन्छ ।
साथै यसले भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घ’टना तथा क्ष्ँति’लाई टार्न सकिने विश्वा:स राखिन्छ । एक प्रकारले यसलाई अन्धविश्वास मान्नेहरु पनि छन् तर पनि पसल तथा सवारीमा कागती र खु’र्सानीको माला झु’ण्डिएकै हुन्छ ।
आखिर यसरी कागती र खुर्सानी’को माला झुण्ड्याउँदा के हुन्छ ? यसबारे केही जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै पनि व्यवसाय वा मेसि’नरी सामाग्रीको प्रयोगमा जो’खिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी कागती र खुर्सानीको माला लगा’उनुमा वास्तु दोष हटाउन सकिने मान्यता रहँदै आएको छ । हुन त घर तथा पस’लको आसपासमा कागतीको रुख भ’एमा वातावरण स्वच्छ हुने र त्यसले मानसिक विचार तथा सोचमा सका’रात्मक असर गर्दछ ।
तर घर तथा पसल आसपासमा विविध कारणले काग’तीको विरुवा लगाउन सबैलाई सहज हुँदैन । त्यसैले कागतीको एक दाना प्रयोग गरेर वास्तुदो’ष हटा’उने गरिन्छ ।
कागतीमा धागो उन्दा कागतीबाट निस्किएको रसबाट लामो समयसम्म सुगन्ध निस्कने र त्यसले वातावरणमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । कागतीको सुगन्धले मानिसको भावनालाई स्वच्छ राख्न मद्धत गर्छ साथै किरा पनि भगाउँछ ।
तर उक्त का’गती एक साता भित्र परीवर्तन गर्नुपर्दछ । त्यसले कागती कुहिन नपाओस् । हावा सफा बनाउन काग’तीको अमिलो राम्रो विकल्प मानिन्छ । खुर्सानीको रागले समेत प्राकृतिक रूपमा वायुलाई स्वच्छ बनाउँछ । – खबर हब
Prevज्योति मगर प्रकाश सपुतले लेखेको कविता सुनेर यसरी धर’ धरी रो’इन् -हेर्नुहोस (भि,डियो सहित)
Nextनेपाली बजारमा सुनको भाउ यी कारणले लगातार घट्दै, हेर्नुहो आज यसरी भयो कारोबार
रमेश प्रसाईले गाए मैथिली भाषाको पहिलो गीत बन्यो भाइरल-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल श्रावण ७ गते बिहीबार इश्वी सन २०२१ जुलाई २२ तारीख
भाइर’ल बेहुली श्रीमा;नसंगै पहिलो पटक मिडियामा, उनका श्रीमान झनै रमा’इला (भि’डियो सहित)
आज पनि बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो त ?
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (117287)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (70801)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (44930)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (39278)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (37130)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (36144)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (35358)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (35002)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (33123)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (32108)
रो, एका पूजा र आकाश अन्ततः मिलेर आए मिडियामा , भयो बिहेसम्मको कुरा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
पूर्वयुवराज पारसले ट्राफिक प्रहरीलाई थ,र्काए, माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेन प्रहरीले-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
कमल बिसी र कल्पना दाहालको “रोधी बस्दा प र्योनी रातै” सा, र्वजनिक-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
घर छोडेकी बिनिताकी आमा पशुपतिमा , बिनिताको बाबाले साउदीको अस्पतालबाट बिनितालाई यस्तो भने (हेर्नुस् भिडियो सहित )